Anụ Ahụ́ Na-akpata Ọrịa Shuga Typedị nke Abụọ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Anụ anụ na-ebute ọrịa shuga - azịza maka ime ihe
Anụ anụ na-ebute ọrịa shuga - azịza maka ime ihe
Anụ Ahụ́ Na-akpata Ọrịa Shuga Typedị nke Abụọ?
Dabere na data sitere na nnukwu ndị isi atọ agbasoro maka 12 ruo 16 afọ gụnyere gụnyere ihe karịrị 289,000 ndị nwoke na ndị nwanyị sitere na Nọọsụ Ahụike Nọọsụ na Ndị Ọkachamara Ahụike Na-agbaso Ndị Nnyocha Na-achọpụta na ndị sonyere na-erikarị nrianụna ọkụkọ esiri elu okpomọkụ dị 1.5 ugboro karịa23.03.2018
Americantù Na-ahụ Maka Ọrịa Shuga nke America na-akọwa ụdị ọrịa shuga nke 2 dị ka ọnọdụ na-adịghị ala ala iji bie: 'Otu n'ime nsogbu ndị na-ebilite bụ na ozugbo ị nwere ọrịa shuga, ọ bụ ọrịa siri ike ịhazi na ịgwọ n'ihi na ha bụ ọrịa na-adịghị ala ala. `` Mgbe ị tụlere na nke Septemba 2018, ọnụ ọgụgụ ndị America - 40% na-arịa ọrịa shuga ma ọ bụ prediabet - ọ ga-apụta na nde mmadụ 100 ga-amụta naanị ịmụ ka esi ebi na ọrịa a nke na-emebi akụkụ ọ bụla dị na ahụ
N'oge na-adịbeghị anya, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Britain bụ Tom Watson kpatara ọgba aghara na ngbanwe nke ụdị ọrịa shuga ya nke abụọ: 'Ọfọn, emere m ya naanị site na ịgbanwe nri m kpamkpam.' N'ebe a, Dr. David Unwin Data sitere na ndị ọrịa mamịrị 66 bụ ndị nwere nri nri maka afọ 2: 'Ugbu a nke okwu 66, 33, 50% nọ na mgbaghara mgbe ọnwa 26 gasịrị.' Yabụ na ọ naghị ada ka ụdị ọrịa shuga nke ụdị 2 ga-adị ala ala.
Ihe edemede a gbasara akụkọ 6 na-eme ka nghọta gị banyere ọrịa shuga sie ike yana otu esi egbochi ya? ntor nwere ike gbanwee ya. Nke a bụ Echiche #gha # 1 na-arịa ọrịa shuga bụ ala ala ọnọdụ. Echiche #gha # 2 - bụ echiche na calorie buru ibu bụ isi ihe kpatara ibu ibu ma yabụ na anyị kwesịrị nyochaa calorie iji jikwaa ọrịa shuga, yana nsonaazụ ahụ nwere ike ịbụ n'ihi ụlọ nri na-edegharị menu ha iji nye ngwaahịa calorie dị ala ma ha belata calorie na ọhụrụ ewebata ngwaahịa ndị dị na menu mgbe niile site na calorie 60, ma ọ bụ 12%.
Na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ, ọ bụrụ na ịnwere ike iwepu ọnụọgụ calorie ahụ na nri ma wepu ya nwere ike inwe nnukwu mmetụta dị ukwuu na oke ibu na ọrịa shuga. Thetù Na-ahụ Maka Ọrịa Shuga nke America na-ekwu na calorie, ma ọ bụghị shuga, na-eduga n'ọrịa shuga, ebe ọ bụ na ibu ibu bụ ihe dị egwu maka ọrịa shuga, kalori pụọ, ọ bụ iwu nke physics - nke thermodynamics, ya mere ọ bụ eziokwu mana mgbe ọ Abịa na ịghọta ịghọta ọnwụ, ọ bụ ihe adịghị mkpa.
N'ihi gịnị? Ọ dị mma, n'ihi na kalori nwere ike ịbụ usoro isi, ha anaghị ekwu ihe ọ bụla gbasara homonụ. Ka anyị leba anya na homonụ ị tụrụ anya ka m kwuo maka ya: insulin. N’isi nke 4 nke akwụkwọ Robert Lustig ‘Fat Chance’ ọ na-akọ akụkọ banyere Marie, afọ iri na isii, onye nwere akpụ na hypothalamus nke radieshon mebisịrị, na kemgbe ahụ ọ ritela kilogram 30 kwa afọ ma tụọ kilogram 99 n’arọ. mgbe Dr.
Funny hụrụ ya oge mbụ. Oge insulin gị rịrị elu nke ukwuu oge ọ bụla ị riri nri. O nwere ụdị uru na-aga n'ihu na-enweta uru site na mbibi ụbụrụ nke a na-akpọ oke ibu nke hypothalamic. ”Dr.
Lustig nyere ya ọgwụ a na-akpọ octreotide, nke na-ebelata ogo insulin. Dị ka mama ya si kwuo, mgbe ọgwụ ahụ gasịrị, ọ na-akwụsị agụụ na ọkara nke nri ọ na-eri, nwee ume karị, ma funahụ 21 n'arọ, ma ọ bụ kilogram 48, n'ime otu afọ. Dr.
Jason Fung rụtụrụ aka na dịka 1921 na 1930s, ejiri insulin mee ihe dịka 'ndị na-eme ka abụba' iji nyere ụmụaka aka ibu ibu na ndị ọrịa na-arịa ọrịa karịa, olee otu m ga-esi mee mmadụ abụba? Ana m enye insulin. 'Ngosipụta doro anya nke njirimara abụba nke insulin bụ' lipohypertrophy '- ihe a maara nke ọma na ndị na-agbanye insulin na-azụlite abụba n'ọtụtụ ebe. ọ bụrụ na m enye insulin ma ọ bụ nye ọgwụ na-eme ka insulin na-abawanye, ị ga-ebu ibu, ndị dọkịta na onye ọrịa ọ bụla na-ewere insulin maraworị nke a.
E nwere ọnọdụ dị ize ndụ akpọrọ diabulemia nke ụdị 1 na-arịa ọrịa shuga na-achọ ibula ibu na-ama ụma gbafee ọgwụ na-ebute nsogbu dị egwu nke ọbara shuga a na-achịkwaghị achịkwa. Laghachi na Marie, agụụ na-agụsi ya ike ma nwekwuo ike na ọgwụ na-eme ka insulin belata, yabụ, ọ riri obere nri ya na ọkụ ọkụ ya na-ezu ike na-arịwanye elu, a na-enyocha calorie kalori, mana nke ahụ bụ naanị ekele insulin na-erughị. Nke a na - eduga na akụkọ ifo ọzọ yiri ya: 'Ma anyị niile ga - alụ ọgụ megide oke ibu na-adabere n'eziokwu dị mfe.
Calori nile na-aguta, n’agbanyeghi ebe ha siri bia. Gụnyere Coca Cola na ihe ọ bụla nwere calorie. 'Echiche #gha # 3 A kalori bụ kalori Mgbe ị na-eri carbohydrates, karịsịa obere-eriri carbohydrates, gị ọbara shuga, ma ọ bụ' ọbara sugar ', adahade na gị pancreas nfuli insulin n'ihi na ọrụ nke insulin bụ ime ka glucose n'ime cell ka jiri ya maka ike iji.
N’aka nke ọzọ, iri protein na-akpata nanị ntakịrị ịhapụ insulin, na abụba abụba na-akpata ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịhapụ insulin. Ya mere olee otu calorie niile nwere ike isi bụrụ abụba? N'agbanyeghị, gịnị ka akwadoro maka ndị ọrịa mamịrị? 'Ntụziaka n'ozuzu bụ ịgwa ndị ọrịa nwere ụdị ọrịa shuga abụọ ka ha rie 40 ruo 65 nke carbohydrates kwa nri tinyere ihe karịrị nri. Nke ahụ bụ ọtụtụ carbohydrates. 'N'ụzọ dị ịtụnanya, a na-agwakarị ndị na-arịa ọrịa shuga Typedị nke abụọ ka ha felata iji belata nguzogide insulin ha ma jikwaa ọrịa shuga ha mana ka ha debekwa ọkwa shuga dị n'ọbara ha mgbe ha na-eri nri buru ibu, a na-agbanyekarị insulin, onye na-eme ka ha maa abụba. .
Nsogbu dị n’iru ụdị ọrịa shuga nke abụọ bụ na mkpụrụ ndụ bụ insulin na - eguzogide ọgwụ insulin, ha na - eguzogide insulin. Nke ahụ pụtara na ha chọrọ insulin ọzọ iji hazie otu ụdị carbohydrates. Ma olee ihe kpatara mgbochi insulin a? bụ homonụ, na homonụ na-arụ ọrụ ha site na ijikọ ndị nabatara n'elu sel ha lekwasịrị anya, dị ka igodo na-adaba n'ime mkpọchi.
Insulin na - arụ ọrụ dị ka igodo ma dabara na mkpọchi nke sel iji meghee ọnụ ụzọ glucose iji mepee sel ahụ ka ọ bụrụ ike gbanwee. Dr. Neal Barnard ji ihe atụ a mee ihe na nkuzi TEDx ọ nyere iji kọwaa tiori ya banyere mmepe nke iguzogide insulin: “Ọ bụrụ na m rute n'ụlọ wee bilie n'ọnụ ụzọ m, ewepụtara m igodo m n'akpa m tinye ya N'ihu? Ọnụ ụzọ.
Ọ naghị arụ ọrụ. Onweghị ihe dị njọ na igodo m. Mana m lere anya n’ime mkpọchi - onye tinyere m chịngọm n’ime mkpọchi m.
Ọfọn, ọ bụrụ na mmadụ nwere ọrịa shuga, igodo insulin ya anaghị arụ ọrụ. Gịnị mere nke ahụ ji bụrụ eziokwu? Ọ bụghị na enwere chịngọm n’ime ụlọnga. Ihe dị bụ abụba.
Intramyocellular lipid bụ abụba na akwara mkpụrụ ndụ gị na nke ahụ na - egbochi ikike nke insulin ị ga - arụ ọrụ dị ka isi iji gosipụta ntinye glucose. Imechi insulin na-eme ka insulin na-eguzogide bụ ihe ọ na-eme na nkeji 10 mbụ nke akwụkwọ akụkọ Kip Andersen bụ 'Gịnị Ahụ Ike' pụtara. 'Ah, ị na-anya m nri ara ara ọ bụghị site na iri shuga ar.
Nke a bụ ihe, ọ bụrụ na m rie bisikiiti nwere shuga, shuga na-arafu gị dị ka Trojan Horse, mana enwere nnukwu ibu na bisikiiti Butter ma ọ bụ mkpụmkpụ. Nke ahụ bụ akụkụ nke na-eduga n'ọrịa shuga, ọ bụ nri mara abụba, ọ bụghị nnukwu shuga. Ihe kpatara ọrịa shuga bụ nri na-eme ka abụba dị n'ọbara bawanye, ana m ekwu maka ụdị nri anụ na-adabere n'ụmụ anụmanụ. 'Ọfọn, Dr.
Barnard gosipụtara na 2009 na nri vegan dị elu nke nwere obere nri glycemic nwere ezigbo nsonaazụ maka ndị ọrịa mamịrị ma e jiri ya tụnyere nri ndị a na-atụ aro maka ọrịa shuga. Mana m ga-arụ ụka na ọtụtụ uru sitere na mmetụta nchebe nke eriri ahụ niile na nri ndị a sitere na osisi. Iri nri carbohydrates kechiri na eriri nke nkpuru aru dika akwukwo nri ga - echebe gi site na spikes na obara obara na insulin - eriri dika ogwu ogwu nke carbohydrate.
Nri Barnard dịkwa oke abụba, mana nke ahụ apụtaghị na abụba bụ onye ọjọọ. Ebe ọ bụ na abụba dị n’uru ndị na-arịa ọrịa shuga, ọ pụtaghị na abụba ndị na-eri nri, ọ bụghị shuga, na-akpata ọrịa shuga, n’ihi na ọ dịkarịa ala, njikọ dị n’etiti ụbara abụba n’ọkpụkpụ akwara na nkwonkwo insulin. Otú ọ dị, nke a jụrụ anyị ajụjụ abụọ.
Nke mbu bu olee otu abuba si banye akwara na mbu? Abụba ị na-eri? Ọ dị mma, ọ dị ntakịrị mgbagwoju anya, mana ọ dabere, dịka ị ga-atụ anya ya, enwere usoro ebe a na-echekwa abụba na-eri ahụ n'ime ahụ gị dị ka abụba na usoro a na-akpọ re-esterification nke ingestion nke abụba Dietary nwere ike ibute mmụba nke abụba na akwara, intramyocellular lipid. Agbanyeghị, buru n'uche na usoro nyochagharị a bụ usoro insulin nyere aka. Ya mere abụba ị na-eri nwere ike ịchekwa ya n'ime ahụ, ụfọdụ n'ime ya nwere ike ịdaba na mọzụlụ, mana insulin na-arị elu ka ị na-eri nri carbohydrates bụ ihe na-echekwa abụba ahụ.
Yabụ iji nwalee ma abụba na-eri nri ọ bụ n'ezie ihe kpatara abụba na-abanye n'ime akwara, ịchọrọ ka ndị mmadụ gaa nri nke nwere abụba dị oke ala mana obere carbohydrates dị ntakịrị ma yabụ insulin dị ala. Nke a ga-adị ka nri nri ketogenic, ebe naanị 5% nke ike sitere na carbohydrates. N'ime ihe ọmụmụ ahụ dị n'elu, agbanyeghị, etinyegoro isiokwu ndị a na nri (25% abụba, 55% carbohydrates, 20% protein). maka ubochi ato ma rie ihe oriri buru ibu ruo ubochi ato.
Mana ọ bụ 60% abụba, 20% carbohydrates na 20% protein. Nke a enweghị ebe dị nso na ketogenic na ọtụtụ agaghị akọwa ya dịka 'obere carb'. Site na 20% carbohydrates, a ka nwere ọtụtụ insulin na-ebuba abụba na-eri n'ime akwara.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị machibido carbohydrates zuru oke? Ọmụmụ ihe a, nke yiri nke ikpeazụ, jiri obere carb na carb na-eri nri iji hụ nke ga-agbakwunye abụba na akwara. Ewezuga na obere nri carb nke ọmụmụ a bụ obere obere carbohydrates na naanị 10% carbs, mgbe ahụ 60% abụba na protein 30%. Nri ha buru ibu bu 60% carbohydrates, 20% fat, protein 20%.
Nsonaazụ ahụ? Oge a ha chọpụtara na 'nri dị elu na-eme ka insulin na-ebu ọnụ'. Ihe gbara ya gburugburu. Ihe intramyocellular lipid kinetics ezughi oke, mana abụba abụghị villain ọ na-egosi dị ka.
O yiri ka insulin na-arụ abụba ahụ ka ọ garuo ebe ọ na-ekwesịghị ịdị ka akwara. Nke ahụ bụ akụkọ ifo # 4: 'Abụba ị na-eri bụ abụba ị na-ebu.' Naanị n'ihi na ị na-eri abụba ị gaghị echekwa ya.
Versiondị okwu ahụ ziri ezi ga-abụ, 'Abụba ị ga-eri nwere ike ịbụ abụba ị buru, ma ọ bụrụ na insulin zuru ezu ịchekwa ya.' Ihe ọzọ ị ga-atụle n'ọmụmụ nke abụọ bụ na a ga-agbanwe carbohydrates na abụba ma wuo ya n'ime mọzụlụ. A na-akpọ usoro nke ịtụgharị carbohydrates na abụba de novo lipogenesis.
A makwaara nke ọma na carbohydrates a nụchara anụcha na-abawanye triglycerides, na nri ketogenic nke nwere abụba na obere carbohydrates na-ebute nsonaazụ triglyceride kachasị mma ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ abụba na akwara, n'agbanyeghị, lelee ehi. Ehi na-eri nri - Ehi na-eri nri nke nwere nnukwu carb nwere ọtụtụ ịba ụba na ahụ ike karịa anụ ehi na-eri nri na-abụkarị abụba abụba abụba abụba na akwara ha.
Chere, mana ha nwere nri ahihia, obughi nri buru oke ibu nri? N'ezie, ihe ruru 70% nke ike achọrọ nke ehi na-eri sitere na fatty acids dị mkpụmkpụ, nke na-emepụta site na microbial gbaa ụka nke ahịhịa na foregut ehi.
Yabụ na ị dabere na teknụzụ na-eri nri dị oke abụba mana ị siri ike ịzụlite abụba ọ bụla na akwara gị. Ajuju ka di. Enwere abụba na akwara ahụ, mana ọ rutere ebe ahụ na mberede, na-agbakwunye ihe mgbochi insulin na-eme ka insulin na-eguzogide? Wellfọdụ isiokwu na-ekwu na abụba dị n’anụ ahụ nwere ike ịbụ isi iyi nke insulin na-eguzogide, mana ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụghị akara nke iguzogide insulin.
Buru ihe ndị a n'uche: ercga mmega nwere mmetụta bara uru na mmetụta insulin. Otú ọ dị, dị ka ọmụmụ a hụrụ, 'mmega mụbara IMCL site na 21%' ka ọ na-emeziwanye insulin. Ihe omume a nwere aha, a na-akpọ ya 'ihe mgbagwoju anya nke ndị na-eme egwuregwu' na ndị nwere ntachi obi a zụrụ azụ nwere mmụba insulin nwekwara oke 'abụba dị na akwara ha nwere ike jikọta na mgbochi insulin, mana o doro anya na ọ bụ isi ihe kpatara ya nke insulin na-eguzogide bụ site na gluing ihe mgbochi insulin.
N'ọnọdụ ọ bụla, 'n'ihi na abụba na-eri nri anaghị eme ka abụba na mkpụrụ ndụ akwara na-agbanyeghị ihe gbara ya gburugburu, na n'ihi na ọtụtụ ndị emeela ka mgbochi insulin ha dịkwuo mma ma gbanwee nri shuga ha site na nri dị ala ma ọ bụ ketogenic,' mgbe izu iri fọrọ nke nta ka ọkara nke ndị ọrịa anyị laghachiri 'ọrịa shuga ha, ihe ruru otu afọ ọnụ ọgụgụ ahụ ruru 60%. Anyị nwere ike ịkpọ echiche ahụ n'enweghị nsogbu 'abụba ndị na-eri nri bụ ihe kpatara insulin na-eguzogide ya na ọrịa shuga' dịka akụkọ ifo 5. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ọ bụ ya, gịnịzi? Na-akpata nkwụsị insulin? Insulin na - akpata insulin na - eguzogide ya, dịka isi na - esi ebute isi isi, ma ọ bụ mmanya na - akpata ị alcoholụ mmanya.
Oge izizi ị zutere enyi gị nwanyị ịga fewe, ịnwere ike ịnụ ísìsì ya nke ọma, mana mgbe nkeji ole na ole ị gaghị ahụ ya ọzọ, ọ bụrụ na ị malite ị drinkingụbiga mmanya ókè ị ga-achọpụta na ọ dị gị mkpa ị moreụkwu mmanya, iji nweta otu mmetụta ahụ. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị nọgide na-enweta ọtụtụ insulin n'ime ọbara gị, sel gị na-eguzogide ọgwụ. Jason Fung kọwara nke a n'akwụkwọ ya bụ Diabetes Code.
Ọ na-ekwu, “Enwere m ike ịme onye ọ bụla insulin na-eguzogide ọgwụ. Naanị ihe m ga-eme bụ inye ya ezigbo insulin. ”N’isi nke isii, Dr.
Fung gosipụtara ọmụmụ ihe atọ: 'Otu n'ime ha nọgidere na-etinye insulin awa iri anọ' n'otu ìgwè nke ndị na-eto eto siri ike ma nke a jiri 15% na-eguzogide insulin. Na nke ọzọ, ịmịnye insulin na-etinye awa 96 oge niile n'otu ìgwè nke ndị na-eto eto siri ike mụbara insulin site na 20 ruo 40 pasent ndị ọrịa mbụ na-anabataghị insulin na-eru oke ọgwụ 100 nke insulin kwa ụbọchị titrated . Dr.
Fung na-ekwu, “Ọ bụrụ na insulin na-arị elu, otú ahụ ka ha na-enwekwu nkwanye insulin - mmekọrịta na-akpata ihe kpatara ya nke ukwuu, nke a na-ekewapụ dị ka onyinyo si n’ahụ́. Ọbụna ka ọkwa shuga dị n'ọbara dịkwuo mma, ọrịa shuga kawanyere njọ. Insulin na - ebute mgbochi insulin “Yabụ nri na - enye carbohydrate na - eme ka ihe dị njọ na - eme ka ị carbohydụ insulin na - abawanye insulin, insulin na - emewanye insulin na - eme ka ị maa abụba.
Nguzogide insulin a pụtara na oge ọzọ ịchọrọ insulin ọzọ, ị na-eri otu ego nke carbohydrates ma mee ka usoro dum dị elu. Mgbe ị rutere ebe ị chọrọ ịgbanye insulin, ị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. Nke a na - eduga anyị na Akụkọ ifo # Mgbakọ Carbohydrates ka Ahụ Ike.
Mba. Ahụ anyị nwere ike ịme glucose niile anyị chọrọ - nke a ka akpọrọ gluconeogenesis. Anyị nwere amino acid dị mkpa, protein ndị a, asịd bara uru, mana mba.
Enweghị carbohydrates dị mkpa. Kwa ụbọchị anyị kacha nta. Mkpụrụ carbohydrates adịghị efu. ”Mgbe ị na-eche ihe a nile, ọ dịka ọ ga - abụ ihe ngwọta dị mfe maka ụdị ọrịa shuga nke abụọ bụ igbari carbohydrates ahụ na - eme ka insulin dị elu.
Ya mere ị nwere ike ịnọ na obere carb ma ọ bụ nri ketogenic, ma ọ bụ ị nwere ike belata insulin gị n'ezie site n'ịghara iri nri. Mana n'ezie ụdị edemede na ntuziaka niile na-emegide ya ma enwere ndị ọkachamara nọ ebe ahụ na-ekwu na ị gaghị aga na keto ma ọ bụ obere nri carb na ọ dị oke egwu na ogologo oge. Ọ bụ izu mara mma nke na m ga-ekwu maka ụdị nchegbu a, yana ozi ndị ọzọ gbasara ọrịa shuga n'onwe ya.
Audible na-akwado edemede a nke m ka na-eji kwa ụbọchị.
Enwetara m ọtụtụ okwu tupu ị jụọ maka usoro nyocha m. Na otutu n'ime ya ka m na-agụ mgbe niile, na ọtụtụ ọgụgụ m na-agụnye ịge akwụkwọ ndị na-abụghị akụkọ na Audible. Enwere m mmasị na nhọrọ ha nke akwụkwọ akụkọ, mana ha nwere ụdị akwụkwọ ọdịyo niile, egosi ọdịyo mbụ, akụkọ, ihe ọchị na ndị ọzọ.
Enwetara m n'oge na-adịbeghị anya Dr. Jason Fung nụrụ 'Usoro Ọrịa Shuga'. Ihe ndị dị n’ime ya dị egwu, mana ihe pụrụ iche na ya bụ na ọ bụ Dr.
Akụkọ Funghim n'onwe ya na-eme nke ọma na m mechara ya n'ime ụbọchị abụọ. Dr. Fung na-abanye n'ime akụkọ ihe mere eme, ọrịa na-efe efe, ihe kpatara na ọgwụgwọ ọrịa shuga, na-eweta echiche dị mgbagwoju anya ebe a na nke Bekee n'ime obere ọchị ọchị.
Ọ na-ewepụkwa ọtụtụ akụkọ ifo ndị gbara ọrịa shuga ma mezie ọtụtụ nkọwahie anyị nwetara banyere nri na-edozi ahụ. Iji nwalee ya, gaa na www.audible.com/whativelearned ma ọ bụ dee ederede 'whativelearned' na 500-500 iji nweta nnwale ụbọchị 30 n'efu na akwụkwọ n'efu.
Ma ugbua ndị otu a na - anụ ihe nwere ike ị nweta karịa nke ndenye aha ha na 2 free AudibleOriginal na mgbakwunye na akwụkwọ ọdịyo na-akwụghị ụgwọ kwa ọnwa.
Kedu nri na-akpata ọrịa shuga?
Diabetesdị ọrịa shuga nke abụọ bụ ọrịa ji ogo shuga dị n'ọbara mara na enweghị ike ịhazi ha. Maka nke a, ọtụtụ mmadụ na-ekwu na ịmị shuga bụ ihe na-akpata ọrịa shuga nke ụdị 2. Ma ọ̀ bụ otú ahụ ka ọ dị? Ka anyị lee ya anya.
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọmụmụ egosila na ndị mmadụ na-a drinkụkarị ihe ọ sugarụ sugarụ na-atọ ụtọ shuga, yabụ ihe ọ withụ drinksụ nwere shuga dị elu, nwere 25% nwere ike ịbawanye ọrịa shuga nke ụdị 2.
N'ezie, ị drinkingụ otu ihe ọ oneụ sugarụ shuga na-atọ ụtọ kwa ụbọchị na-eme ka ihe egwu gị bụrụ ihe dịka 13% n'agbanyeghị oke ibu bara uru. Nyocha ahụ na nyocha ahụ kwubiri na n'ime ihe nde 20.9 nke ụdị ọrịa shuga 2 a na-atụ anya na United States karịa afọ 10, nde 1.8 ga-abụ n'ihi ịverageụ ihe ọ sugarụ sugarụ shuga si na 2.6 nde Ihe omume dị na UK ga-ekwu na 79,000 ka shuga dị ụtọ oriri onunu.
Na mgbakwunye, mba ndị a na-a highestụkarị shuga na-enwekwa ọnụọgụ kachasị elu nke ụdị ọrịa shuga abụọ, ebe ndị nwere obere oriri nwere ọnụ ọgụgụ dị ala karịa. gọnahụ ya. Ya mere, gịnị na-eme mgbe ahụ? Ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta kwenyere na shuga na-amụba ohere nke ụdị ọrịa shuga abụọ kpọmkwem na n'ụzọ na-apụtachaghị ìhè. Ọtụtụ na-eme ka ihe egwu gị dịkwuo elu n'ihi mmetụta fructose nwere na imeju gị, gụnyere ịkwalite ọrịa imeju abụba, mbufụt, na nguzogide insulin metụtara.
Iri shuga dị ukwuu pụkwara n’ụzọ na-enweghị isi ibute ihe ize ndụ nke ọrịa shuga site n’itinye ụtụ na uru bara ụba na ịba ụba abụba ahụ. Ihe ndị a bụ ihe dị iche iche dị ize ndụ maka ịrịa ọrịa shuga ma ọ bụ ụdị ọrịa shuga nke abụọ, mana ha nwekwara ihe egwu dị egwu. Ya mere mmetụta nke shuga na-abụkarị okpukpu abụọ karịa calorie.
Ya mere, calorie ndị a na-eduga n'ịba ụba na uru a, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ na-eme na mpaghara afọ, nwere ike iduga nkwụsị insulin, nke nwere ike ibute ụdị ọrịa shuga 2. Mkpụrụ shuga anaghị eme otu ihe. Tupu ị gabiga ma tụfuo ihe niile na windo kichin na shuga, ị maara na shuga nkịtị abụghị nsogbu, isi sugars sitere n'okike bụ shuga dị na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, anaghị atụkwasị ya na usoro imepụta.
Ebe ọ bụ na shuga ndị a dị na matrik nke eriri, mmiri, antioxidants, na nri ndị ọzọ, a na-agbari ha nwayọ nwayọ ma ha agaghị enwe ike ibute spikes sugar. Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na-enwekwa obere bekee site na ịdị arọ karịa ọtụtụ nri esichara, na-eme ka ọ dị mfe bụ ijide nri gị. Dịka ọmụmaatụ, piich nwere ihe dị ka pasent 8 site na shuga dị arọ, ebe Ogwe Snickers ma ọ bụ Ogwe Mars nwere pasent 50 site na shuga dị arọ.
Ọ bụ ezie na nyocha ahụ agwakọtara ọnụ, ụfọdụ ọmụmụ achọpụtala na iri mkpụrụ osisi ma ọ dịkarịa ala otu mkpụrụ ụbọchị, na-ebelata ohere nke ọrịa shuga site na 7% gaa 13%, ma e jiri ya tụnyere iri nri na-enweghị mkpụrụ osisi ị makwaara na ị na-enyo ndị nwere mkpụrụ osisi na-eri nri karịa. nwere ike ime ka nhọrọ nri na-eme ka ahụ sie ike n'ozuzu ya. Ọ dị mma maka ihe ọ juiceụ juiceụ mkpụrụ osisi? Ọmụmụ ihe emeela nsonaazụ ndị a, ya mere achọrọ nyocha ọzọ. Echere m na mgbe ị tụlere na ọ bụ calorie ndị ọzọ ị toụ ihe ọ likeụ likeụ dị ka lemonade, ọ ga-abụ na calorie ndị ahụ bụ calorie ndị ọzọ ga-etinye gị na calorie karịa ebe ị ga-ebu ibu, mgbe ahụ ọ na-abawanye n'ihe ize ndụ gị maka ụdị ọrịa shuga 2, ya mere na nke ahụ, m ga-asị ee, ihe ọ juiceụ juiceụ na-enyere aka.
Banyere ihe ụtọ dị n'okike dịka mmanụ a honeyụ, syrup maple, na agave, n'agbanyeghị na ọ bụ sitere na mkpụrụ osisi sitere n'okike, a ka na-anụcha ha nke ọma, dị ka sucrose ma ọ bụ shuga tebụl. N'ụzọ bụ isi, ha ka bụ isi mmalite nke sugar agbakwunyere, dị ka okpokoro okpokoro, ị kwesịrị ị na-eme ka ha nwee ntakịrị ntakịrị. Ihe ndị ọzọ na-ebute ọrịa shuga.
Nri shuga bụ naanị otu egwuregwu. Ndị a bụkwa nnukwu ihe dị na ụdị ọrịa shuga 2 -Ihe ize ndụ. Nke mbu, O bu ibu ibu bu otu n’ime ihe n’eme ka oria shuga nke abuo.
Fufu ihe dị ka 5 ruo 10% nke ịdị arọ gị nwere ike belata ihe egwu a. Mmega ahụ dịkwa ezigbo mkpa nye ndị na-arụ ọrụ. Naanị minit 150 nke imega arụ ọrụ kwa izu nwere ike belata ihe egwu a.
Ụ sịga 20 ma ọ bụ karịa otu ụbọchị karịa okpukpu abụọ nke ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa shuga. N'ụzọ dị mma, ozugbo ịkwụsị ị smokingụ sịga, ihe ize ndụ a fọrọ nke nta ka ọ laghachi azụ. Ikwo ụra bụ ọnọdụ ebe a na-egbochi iku ume n'abalị na nke a bụ ihe pụrụ iche pụrụ iche maka ọrịa shuga, mana ọ na-eme ka m chee na ụra na-adịghị mma, ụra na-adịghị mma nke ihe ndị ọzọ kpatara, bụkwa ihe na-akpata.
Ana m eche. N'ikpeazụ, n'ezie, mkpụrụ ndụ ihe nketa e 2 ọrịa shuga bụ 40% ma ọ bụrụ na otu n'ime ndị mụrụ gị na-arịa ya yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% ma ọ bụrụ na nne na nna na-arịa ya. Ya mere, nke a na-egosikwa na mkpụrụ ndụ ihe nketa siri ike.
Odi mma ka anyi kechie ya. Ya mere oriri shuga dị elu dị elu yana ọnụọgụ nke ọrịa shuga nke ụdị 2. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi mmetụta ọjọọ ọ na-enwe na imeju, mana nke ka mkpa bụ na ọ na-eme ka i nwekwuo oke uru na oke ibu.
Iberibe abụba ị nwere n’akụkụ akụkụ gị, ọkachasị ka ị na-etolite, o yikarịrị ka ị ga-etolite nsogbu metabolic. N'ụzọ na-akpali mmasị, shuga shuga ndị a chọtara na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri niile enweghị ihe jikọrọ ha na ọrịa shuga na-arịwanye elu. Ya mere, nsogbu bụ shuga na ụdị nke anyị na-eme dị ka ihe ọ softụ softụ dị nro, ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi, achịcha, kuki, lollipops, wdg. Metụtara oke nri caloric.
Yabụ, ọ bụrụ na ị na-eri ezigbo nri zuru oke ma ọ bụghị nri nri nri, ị kwesịrị ịdị mma. Ma ọ bụrụ na ịbelata ihe oriri ị na-a sugarụ na shuga yiri ka ọ karịrị akarị na mbụ, ị nwere ike kpakpando site na ịhapụ ihe ọ sugarụ sugarụ shuga dị ụtọ dị ka mmanya na-atọ ụtọ na mmiri mkpụrụ osisi. Ihe ndị a bụ isi mmalite shuga agbakwunyere na nri Western, obere mgbanwe a nwere ike inwe nnukwu mmetụta.
Daalụ maka ikiri, nye isiokwu a mkpịsị aka ukwu ma ọ bụrụ na ị chọpụta na ọ na-enye ihe ọmụma, echefula ịdenye aha na Authority Nutrition's Healthline YouTube channel site na ịpị bọtịnụ na-acha uhie uhie n'okpuru isiokwu a (egwu egwu)
Gịnị na-akpata ọrịa shuga kpọmkwem?
AnọNriNhọrọ Ndị Na-amụba Uche GịỌrịa shugaEgwu
Iji malitena-eri nrigbasiri ike taa, lekwasị anya maka anọ ndị anriìgwè ndị a maara na-abawanye ohere nke ụdị 2ọrịa shuga.
Na-arụ ọrụ nke ọma Carbohydrates.
Ihe ọ Dụ Dụ na-atọ ụtọ Sugar.
Abụba na Trans Fats.
Anụ na-acha uhie uhie na hazie ya.
Echere m mgbe niile na ọtụtụ shuga na-ebute ọrịa shuga. Um, ọ bụ obere ihe mgbagwoju anya. Ọrịa shuga bụ ihe a na-ahụkarị.
Otu onye n’ime mmadụ iri nwere ya. Ọtụtụ iri puku mmadụ na-anwụ site na ya kwa afọ. Dịka otu ọmụmụ CDC si kwuo, otu onye n'ime mmadụ atọ n'ime ndị America nwere ike ịrịa ọrịa shuga na 2050 ma ọ bụrụ na ihe gara n'ihu.
Mgbe ị na-arịa ọrịa shuga a na-anaghị achịkwa, ị nwere oke shuga, ọkachasị glucose, n'ọbara gị. Ya mere ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụrụ na ị consumptionụ oke shuga bụ ihe kpatara ya. Iji ghọta otu shuga dị n'ọbara gị na shuga ị na-eri si nwee njikọ, ka anyị bido na mbido: ịhazi shuga.
You na-eri ihe, kwuo apụl, ka ị na-agbari ya, ị na-agbaji nnukwu shuga dị na apụl ahụ dịka sucrose n'ime obere dị ka fructose na glucose, nke ahụ banye ọbara gị. Mgbe ọbara shuga na-arị elu. Pancreas gị na-amalite imepụta mmiri ọgwụ insulin.
Insulin na glucose na-aga mkpụrụ ndụ gị site n'ọbara gị. Insulin na-ebu ụzọ jikọta onye na-anabata insulin. Na nke ahụ na-eziga mgbaàmà na-agwa mkpụrụ ndụ gị ka ị banye na glucose.
Mkpụrụ ndụ gị na-eji glucose a emepụta ike, ume nke na-eme ka uru ahụ gị na-agagharị, ụbụrụ gị na-arụ ọrụ, na ọtụtụ usoro ndị ọzọ dị mkpa na-eme ka ị dị ndụ. Na-arịa ọrịa shuga, usoro a niile apụtaghị. Ma otu o si esi na whack na-adabere n'ụdị ọrịa shuga.
N’ụdị nke mbụ, usoro ahụ́ gị ji alụso ọrịa ọgụ na-ebibi mkpụrụ ndụ dị n’akụkụ pancreas gị nke na-emepụta insulin. Ebe ọ bụ na enweghi insulin dị obere iji jikọta ndị nabatara na sel gị, obere glucose na-abanye n'ọbara ma ị nwere ọtụtụ glucose n'ọbara gị. A na-ahụkarị ụdị ọrịa shuga nke ụdị 2 karịa ọrịa shuga nke ụdị 1.
Ọ bụ n'ezie gburugburu 90% nke ọrịa shuga ọ bụla. N’ụdị nke abụọ, pancreas gị na-emepụta insulin, mana sel gị anaghị aza ya. Ọ na-abụkarị n'ihi na mgbaàmà na-agwa mkpụrụ ndụ gị ka ị hapụ glucose ka ị gaghị agafe.
A maara nke a dị ka nkwụsị insulin. Ọ bụrụ na ị na-eguzogide insulin, pancreas gị ga-emepụta insulin na-aga n'ihu iji na-agbago ogo ogo shuga dị n'ọbara. Nke a nwere ike ịrụ ọrụ nwa oge.
Ole shuga dị n'ọbara gị na-adịkarị nkịtị, mana ka oge na-aga, pancreas gị agaghị enwe ike ijide onwe gị. Dịkwa ka withdị nke mbụ, ị ga-enwe ọtụtụ glucose n'ọbara gị. Ọrịa mamịrị afọ bụ ụdị ọrịa shuga mmadụ na-arịa mgbe ọ dị ime.
Dịka withdị nke abụọ, onye dị ime na-eguzogide insulin. Amaghị m nke a tupu m eme nyocha maka isiokwu a, mana n'etiti 30 na 50% nke ndị nwere ọrịa shuga na-emepụta ụdị 2 n'ime afọ iri na-abịanụ, yabụ gịnị kpatara glucose dị n'ọbara dị oke njọ? Nke mbu, oburu na enwere otutu glucose n’ime ọbara gi o yikarịrị ka glucose ezughi ezu abanye n’ime sel gi, nke bu nsogbu. Nke abuo, oke shuga dị n’ọbara gị nwekwara ike imebi akwara ọbara gị, nke pụtara na ọbara gị ga-agwụ. t igbasa kwa.
Na nke ahụ nwere ihe ọghọm nke nkụchi obi, ọrịa strok ma ọ bụ mmebi akụrụ yana akwara na nsogbu ahụ ụzọ. Akụrụ gị na-anwa idozi nsogbu a site na ịhapụ glucose dị n'ime mamịrị gị ma were ọtụtụ mmiri si na anụ ahụ gị. N'ihi nke a, ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ malitere ịghọta na ha nwere ike ịrịa ọrịa shuga na-enwe akpịrị ịkpọ nkụ ma na-asụ nsị n'oge niile.
Ka ọrịa ahụ na-aga n’ihu, ihe mgbaàmà ya na-adịwanye njọ. Ọ na-esiri ndị mmadụ ike ịgbake site na ọrịa ma ọ bụ ọnya na-agwọ, na mgbe e mesịrị. E nwere nsogbu ka ukwuu n’ihe ndị m kwuru banyere ha, dị ka: B. imebi akụrụ.
A na-achọpụta ọrịa shuga na-adabere n’otụ glucose dị n’ọbara gị. Ya mere o yiri ka ihe ezi uche dị na nri shuga shuga ga-ebute nke a, nke a bụ isiokwu na-ese okwu karịa ka ị nwere ike iche. Enweghị ọmụmụ mmadụ na-egosi na ịkọ ọtụtụ shuga na-akpata ụdị ọrịa shuga nke abụọ n'ihi na ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya ndị sayensị inye ndị mmadụ ọrịa shuga.
Otú ọ dị, enwere ọmụmụ ihe na-egosi na ịgbakwunye ọtụtụ shuga na nri gị nwere ike iduga nkwụsị insulin, nke nwere ike ibute ụdị ọrịa shuga 2. N'ime otu ọmụmụ ihe dị otú a, ndị ọkà mmụta sayensị tinyere ndị ọrụ afọ ofufo na nri ebe 25% nke calorie dị na nri ha sitere na ihe ọveraụveraụ na-atọ ụtọ na glucose ma ọ bụ fructose maka izu 10. N'ụzọ na-akpali mmasị, ha chọpụtara na ndị ọrụ afọ ofufo na nri fructose dị elu emeela ka glucose dị n'ọbara na insulin dị elu ma bụrụ ndị na-enweghị mmetụta insulin.
Ha ahụghị nke ahụ na nri glucose dị elu. O dozighi anya ihe kpatara eji aga ọrụ ịchọpụta ihe ndị a niile. Otu ihe doro anya bụ na oke ibu bụ nnukwu ihe egwu na-ebute ụdị ọrịa shuga abụọ, shuga na-ekerekwa na nke a.
Mgbe ị na-eri shuga karịa anụ ahụ gị nwere ike ịtụgharị n'ime ike, a na-echekwa shuga ahụ dị ka abụba na abụba ndị ọzọ, ọkachasị abụba n'ime oghere afọ gị n'akụkụ ọtụtụ akụkụ gị nwere ike ibute mbufụt. Nnyocha ụfọdụ egosiwo na mbufụt na-eme ka mkpụrụ ndụ anyị nwee ike iguzogide insulin na nkwụsi ike nwere ike ibute nsị ọzọ. Nke ahụ na - edugakwa na nguzogide insulin nke, dịka ị maara ugbu a, nwere ike ibute ọkwa shuga dị elu dị elu.
Ma ọtụtụ shuga dị na nri mmadụ ka nwere ike ime ka insulin dịkwuo ike. Ọ bụrụgodi na onye nwere ụdị ọrịa shuga nke abụọ enwetaghị ibu, nri ahụike na mmega ahụ mgbe ụfọdụ ga-ezuru ya ịnagide ya, mana o yikarịrị ka dọkịta ga-edepụta ọgwụ dị iche iche iji mee ka ogo shuga dị n'ọbara dị mma. Enwekwara otutu nyocha n'ime ebe a gbadoro anya igbochi na obughari oria shuga na nsogbu ya.
Anụ anụ ma ọ bụ carbs na-ebute ọrịa shuga?
Iji gbalịa imeri nguzogide insulin, pancreas na-emepụta insulin ọzọ. Mgbe pancreas enwekwaghị ike ijide onwe ya, ọbara shuga na-arị elu. Njikọ nke mgbochi insulin na ọdịda pancreaticna-eduga napịnye 2ọrịa shuga.07.08.2017
'Gini mere nri ji buru ihe egwu di na oria oria oria?' Anyị maara na ibubiga oke oke na oke ibu bụ isi ihe kpatara nsogbu nke ọrịa shuga 2, mana rue oge na-adịbeghị anya, ọrụ nri ụfọdụ anaghị enye nnukwu nlebara anya na ndị na-enyocha anụ na ọrịa shuga hụrụ nnukwu ihe egwu dị na nke ahụ. na iri anụ niile, ọkachasị anụ esichara, ọkachasị ọkụkọ. Mana gịnị mere? Enwere otutu ndi nwere ike ime aru. Ikekwe, ọ bụ abụba jupụta na abụba anụmanụ.
Ma eleghị anya, ọ bụ abụba ndị na-adịkarị na anụ, ma eleghị anya ọ bụ cholesterol ma ọ bụ protein anụmanụ. Irongwè akụrụngwa dị na anụ nwere ike ibute ihe ndị na-enweghị ihe ọ bụla, na nke a na-ebute iron na-akpata nrụgide nwere ike ibute mbufụt na-adịghị ala ala na ụdị ọrịa shuga 2 na-eduga iji kwalite nrụgide oxidative na mbufụt, na nyocha nri na-egosi na ọkwa kachasị elu nke ndị a na-akpọ glycotoxins dị na anụ, ọkachasị anụ e ghere eghe, nke a roara n’ọkụ, ma ọ bụ nke esiri. Ihe oriri niile sitere na isi anụmanụ nwere ike ịbụ isi mmalite nke mmiri ọgwụ ndị a.
N'ime ọmụmụ ihe a, ha nyere nri ndị jupụtara n'ọrịa mamịrị nri glycotoxin jupụtara dị ka ọkụkọ, azụ, na akwa, yana akara ha nke mbufụt gbaruru elu: ihe necrosis nke tumor, protein C-reactive, irighiri mkpụrụ ndụ akwara. Ya mere, na ọrịa shuga, AGEs na-eri nri na-akwalite ndị ogbugbo mkpali nke na-eduga na mmebi anụ ahụ. Otú ọ dị, ozi ọma ahụ bụ na igbochi ụdị nri a nwere ike ịkwụsị mmetụta ndị a na-agba ọkụ.
Ihe ndị kwesịrị ekwesị iji belata oge AGE, dị ka naanị ịmị ọkụ na ị cookingụ anụ, nwere ike belata nnukwu nsị ndị a na ndị ọrịa mamịrị. Glycotoxins ndị a nwere ike ịbụ njikọ na-efu n'etiti oriri na-aba ụba nke abụba anụmanụ na anụ na mmepe nke ụdị ọrịa shuga 2 n'ozuzu. Ebe ọ bụ na e bipụtara 2013 meta-analysis, ọmụmụ a bịara, nke ihe dị ka mmadụ 17,000 nọrọ ihe dị ka afọ iri na abụọ ka a hụrụ.
Ha hụrụ 8% ọnụọgụ dị ukwuu nke f ma ọ bụ gram 50 ọ bụla nke anụ oriri kwa ụbọchị. Ọ dị ka iri otu ụzọ n'ụzọ anọ nke anụ ọkụkọ ụbọchị zuru oke na-abawanye n'ihe egwu gị nke ọrịa shuga. Ee, ọ nwere ike ịbụ glycotoxins dị na anụ ma ọ bụ abụba juputara na abụba ma ọ bụ trans-fat na anụ ma ọ bụ igwe heme nke nwere ike ịkwalite nguzo carcinogens akpọ nitrosamines, n'agbanyeghị na enwere ike mepụta ha n'oge isi nri n'onwe ya, mana nke a bụ ndụ ọhụrụ.
Ikekwe enwere ụdị ọrịa shuga nke na-ebute ndị na-efe efe zoonotic dịka nje na anụ ọhụrụ, gụnyere anụ ọkụkọ. Nchịkọta oke nke enzyme TOR na ịka nká nwere ike ịbụ ihe na-ekpebi ọrịa na-arịa ọrịa shuga, mana ọ bụghị nri niile. Ọ bụghị naanị na protein ndị anụmanụ nwere ike kpalite hormone IGF-1 na-eto eto na-eto eto kansa, mana ha na-enyekwa leucine dị elu, nke na-akpali ọrụ TOR ma yie ka ọ na-agba mkpụrụ ndụ beta na-emepụta insulin na pancreas ọkụ, na-enye aka iji pịnye ọrịa shuga 2.
Ya mere, ọ bụghị naanị abụba dị elu na shuga agbakwunye. A ga-akwụ ụgwọ nlebara anya maka nri ndị na-edozi ahụ kwa ụbọchị. Ke ofụri ofụri, ala leucine etoju na-na-enweta n'ezie n'ezie site na-egbochi anụmanụ na-edozi.
Dị ka m kwuru na mbụ, iji nweta mmiri absorption site na mmiri ara ehi ma ọ bụ anụ, anyị ga-eri kabọn itoolu kabeeji na 100 apụl. Nkọwa ndị a na-egosi oke esemokwu dị iche iche nke leucine nke usoro nri na-enye ma e jiri ya tụnyere nri karịa osisi. Ọrụ nke ihe mmetọ endocrine na-emepụta ihe na ihe oriri nwere ike ịrụ na usoro isiokwu atọ.
N’ụzọ doro anya, usoro nri na ụdị ndụ ndị America na-atụnye ụtụ n’ọdachi ọrịa shuga na oke ibu, mana enweghị ike ileghara ọrụ mmetọ ụlọ ọrụ ndị a anya. Ugbu a, anyị nwere ihe akaebe na-egosi na ikpughe na nsị nke ụlọ ọrụ naanị na-ebute uru bara ụba na insulin na-eguzogide, ya mere, ọ nwere ike bụrụ obere ihe kpatara oke ibu na ọrịa shuga. Chee echiche ihe na - eme umuaka anyi n’ime onwa isii, o n’orughi ihe oriri ma obu ibi ndu.
A na-ekpughere ha ọtụtụ narị kemịkal site na nne ha, n'okpuru eriri nwa, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ibu oke ibu - na-ebute oke ibu. Site na ọtụtụ nde kilogram na kemịkal dị arọ ewepụtara na gburugburu ebe obibi kwa afọ, ọ kwesịrị ime ka anyị niile kwụsị ma chee maka otu anyị si ebi na nhọrọ ndị anyị na-eme kwa ụbọchị gbasara nri anyị. Ee, enwere ike kpughere anyị site na nsị na-egbu egbu, mana imirikiti mmadụ na-ekpughe taa bụ site na ị foodụ nri emetọtara site na bioaccumulation na usoro nri.
Isi mmalite, ihe dị ka 95%, nke nkwado mmetọ na-adịgide bụ ingestion nke abụba anụmanụ.
Kwesịrị ka ndị ọrịa mamịrị zere anụ uhie?
Dị ka carbs, mmadụkwesịrịjiri nlezianya họrọ isi protein ha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha nwereọrịa shuga. Iri nrianụ uhie, dị kaehi, anụ ezi, na atụrụ, nwere ike ịbawanye ohere nkeọrịa shuga, ọbụna na obere oriri.
Ndị ọria mamịrị ha nwere ike iri nri na ụzọ ụgbọ oloko?
Nhọrọ nhọrọ ga-enwe nhọrọ nke otu achịcha ọhụrụ, akwụkwọ nri na ihe ndị ahịa nwere ịhụ n'anya.GburugburuLọ oriri na ọrantsụuụ ejiriwo VITAZEST Water naỌrịa shugaFoundation Research Foundation iji mepụta nhọrọ nri nke dabara nke ọmaonye mamirinri.
Akwa dị mma maka ọrịa shuga?
Akwabụ nri dịgasị iche iche na nnukwu protein. Onye AmericaỌrịa shugaAssociation tụlereakwanhọrọ magburu onwe ya maka ndị nwereọrịa shuga. Nke ahụ bụ n'ihi na otu buru ibuakwanwere ihe dị ka ọkara gram nke carbohydrates, yabụ echere na ha agaghị ebuli shuga ọbara gị.
Unere dị mma maka ọrịa shuga?
Unerebụ mkpụrụ osisi dị mma ma na-edozi ahụ maka ndị mmadụọrịa shugairi nri na-edozi oke dịka akụkụ nke usoro ihe oriri na-edozi ahụ, iche iche. Onye nwereọrịa shugakwesiri itinye nri ohuru, ihe oku nri dika ihe nkpuru osisi na akwukwo nri.Unereenye otutu nri n’enyeghi otutu kalori.
Nwere ike ịrịa ọrịa shuga?
Dị ka nchọpụta na-adịbeghị anya, pịnye 2ọrịa shugaenweghị ike ịgwọta, mana ndị mmadụ n'otu n'otunwere ikenwere ogo glucose ịlaghachi na-abụghịọrịa shuganso, (zuru ezu remission) ma ọ bụ na-ọrịa shugaọkwa glucose (ọkara remission) Ihe bụ isi nke ndị mmadụ nwere ụdị 2ọrịa shuganweta mgbaghara bụ site na ịhapụ ọtụtụ
Nwere ike ịrịa ọrịa shuga site na iri oke shuga?
Ngafeshugaoriri naọrịa shuga
Typedị nke abụọ na pịnye 2ọrịa shugana-emetụta ikike ahụ nke ịhazi ọbaraglucoseetoju.Sugaroriri agaghị ebute ụdị ọ bụla. Otú ọ dị,na-eri oke ikeakpata ibu ibu. Ibu bụ ihe dị egwu maka ụdị 2ọrịa shuga.
Enwere njikọ dị n'etiti anụ uhie uhie na ụdị ọrịa shuga Typedị nke Abụọ?
Nnukwu ọmụmụ na-achọpụta na oriri dị elu na-abawanye ihe egwu, mana ndị ọkachamara na-emegide nchoputa MONDAY, June 17 (HealthDay News) - Ndị mmadụ na-eri ọtụtụ anụ uhie na-abawanye ohere ha nwere ịrịa ụdị ọrịa shuga abụọ, ebe ndị na-egbutu anụ uhie. ebipụ ha n'ihe ize ndụ.
Kedu ụdị anụ dị njọ maka ndị ọrịa mamịrị?
Ihe ndị dị ka anụ anụ na soseji nwere ike ịnwe ogige na mgbakwunye ndị na-eme ihe na-adịghị mma, na-eme ka ọrịa shuga na-akawanye njọ ma na-eduga n'ọrịa ndị ọzọ na-adịghị ala ala n'ọdịnihu. Kedu anụ dị mma maka ụdị ọrịa shuga nke ụdị 2?
Ọ bụ eziokwu na anụ na-ebute shuga dị n’ọbara?
Anụ na-eme ka ọbara shuga dị elu? Ọ gwụla ma enwere carb rie n'akụkụ ya. Ma abụba na ndị nwere ihe nwere ike imetụta ahụike gị dum, na-emetụta ikike ahụ gị ijikwa ogo shuga dị n'ọbara ya. Achịcha anụ, dị ka anụ ezi, ahụwokwa nri 1 carcinogenic nke Healthtù Ahụ Ike Worldwa.